सार्वभौम राष्ट्रमा जनताको अधिकार
अधिवक्ता अवध किशोर प्रसाद । के नेपाल वास्तवमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र हो ? यदि छ भने ? यहाँका नेताहरू यति किन डराइरहेका छन् ? यहाँका नागरिक आफ्नै हक अधिकारको माग उठाउँदा देश नै टुक्रिने छ रे ? देशको सार्वभौमिकता खतरामा पर्छ कसरी ? जवाफ छैन ।
मधेशी नेताहरू भारतीय दुतावास गयो रे । त्यसमा डर, मधेशी नेताहरू दिल्ली गयो । त्यसमा डर, थर–थर काम्ने किन ? कहीं न कहीं किन्तु परन्तु छ । मधेशीसँग बेइमानी गरिएको छ र उनीहरूको अधिकार खोसेको छ । त्यसैले मधेशीसँग डराइरहेको छ । मेरो बेइमानी उनीहरूले थाहा पाइसक्यो । मलाई समात्छ कि चोरलाई डर भइरहन्छ । त्यस्तै डर यहाँ छ । मधेशीको सर्वस्वहरण सानो कुरा होइन । २५० वर्षदेखि गुलाम बनाइरहेकोमा अब आफ्नो अधिकार नलिई छाडनेवाला छैन ।
हकअधिकार माग्दा देश टुक्रिने कुरा कहाँबाट आयो ? प्रदेशको सीमांकन सच्याउनुमा देशको अखण्डता खण्डित हुन्छ कसरी ? आन्तरिक कुरा बाह्य बन्न गयो कसरी ? नेपालको अखण्डता र सार्वभौमिकता नक्कली त होइन ? असली छ भने के को डर ? तर असली लाग्दैन ।
संविधान परिवर्तनशील हो । समय सापेक्ष सुधार हुन्छ तर अहिले अडान लिएको छ संविधानको औचित्य के ? के इमान्दार नेतालाई बोध छैन ? मधेशीसँग बेइमानी भइराखेको छ । मतलब नेपालको अखण्डता बलियो छैन । आन्तरिक सिमाना सच्याउनुमा खण्डित हुन्छ मधेश ।
यसको सिधा मतलब छ मधेश आफ्नो होइन । अरूको छ कही फुत्काइदिन्छ कि, लगेर भाग्छ । होइन ? नक्कली संप्रभुता कति दिन ? असली त एक दिन सामुने आउँछ नै । असली राष्ट्रवादी को त ? मुखौटा लगाएर टुडिखेलमा जो डान्स हुन्छ, त्यस्तो डान्स अब चल्दैन । राष्ट्रवादको मतलब सधैं भारत विरोध । मधेश विरोध । अब यो नारा पुरानो भइसक्यो ।
डर नं. १. १८१६ को सुगौली सन्धिको डर । कि १९५० को भारत नेपाल मैत्री सन्धि को डर ? केको डर ? हो । एउटा डर छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको डर UNO (यू.एन.ओ.) सँग झुठ बोलेको डर नेपालले १९५५ को सदस्यता लिने बखतमा UNO ले सोधेको थियो तपाइको देशमा कुनै यस्तो क्षेत्र छ जो स्वतन्त्रता प्राप्तिको हक राख्छ ?
नेपालले झुठ बोल्यो । यस्तो कुनै क्षेत्र छैन । तर मधेश यस्तो क्षेत्र हो जुन स्वतन्त्रता प्राप्तिको हक राख्दछ । मधेशको सुपुर्दगी, मधेशी जनताको समर्थन विना नै भएको छ । जो कि अवैध छ हेर्नुस् संयुक्त राष्ट्र प्रकाशन S.T/D.P.I/SERA/173/REVI अंग्रेजी पृष्ठ 8 April 1957 U.N.O.को काठमाडौं Office वा कानून मन्त्रालयमा पनि हेर्न सकिन्छ ।
तर मधेशी जनता नेपालीसँगै बस्न चाहन्छ । नेपालीले चाहँदैन । डर नं. २. एउटा अर्को डर पनि छ । विखण्डनको सन्दर्भमा देशको मजबुती र एकताका लागि स्थिरता, साम्प्रदायिक सद्भाव, आजिविका र मजबुत अर्थव्यस्था अपरिहार्य छ । यो चार स्तम्भ हो । स्थिरताको लागि सहिष्णुता जरूरी छ । तर यहाँ सहिष्णुता छैन । ईष्र्या र द्वेष छ । मधेशीको “म” पनि सुन्न चाहँदैन ।
विचारवान कुमायु ब्राह्मण नेताहरू आफू कुमायू (भारतको) तर मधेशीलाई इन्डियन भन्ने । मधेशी शहीदको अपमान गर्ने, किरा मकोरा भन्ने, सडेगलेको भन्ने । अहिलेसम्म देश टुटेको छैन भने आश्चर्यको कुरो हो । विचारमा मतभेद हुन सक्छ । तर मतभेद हुन हुँदैन ।
यहाँ त मतभेद त मनमा नै दुष्ट भाव छ । देश इमानदारीमा चल्छ । बेइमानीमा होइन । देशमा एउटा पनि राजनेता छैनन् । सबै क्षेत्रीय नेता हुन् । यो जिल्ला हाम्रो हो । टुक्र्नु हुँदैन । यो जिल्ला हाम्रो मधेशमा जान हुँदैन यो देश हाम्रो हो । यो मधेश हाम्रो हो भन्दैन । हाम्रो मैदानमा को छ त राष्ट्रियस्तरका नेता ?
डर नं.३. सहिष्णुता छैन जे मन लाग्यो, मधेशको विरूद्धमा बोलिदियो । खसवादी लेखकहरू सबै पत्रपत्रिकामा मधेश विरोधी लेख लेख्नु आफ्नो कर्तव्य सम्झन्छन् । सधैं प्रश्न उठाउँछन् संविधान संशोधन कसका लागि ? अधिकारका लागि । के यो लाग्दैन कि मधेशीसँग बेइमानी गरी रहनु भएको छ । अहिलेसम्म यो महसुस भइरहेको छैन भने बेइमानीको यो पराकाष्ठा हो । देश इमान्दारीले चल्छ ।
बेइमानीले होइन । देउवाजी ओलीलाई सम्झाउनु हुन्छ । मधेशी आफ्नै दाजूभाई हो । यसको मतलब आफ्नो दाजुलाई मानीरहेको छैन । गैर नै मानि रहेको छ । प्रष्ट छ । गैर छौं भने तपाइसँग किन बस्ने र शान्तिपूर्वक पनि बाँडफाँड हुन्छ । हतियारले मात्र हुँदैन । भाई साहव मधेशीको कार्यको परीक्षा कति दिनसम्म लिइरहने ।
एक दिन त धौर्यताको बाँध टुट्छ । यस्तै रहयो भने भारतीय मनसाय पनि यस्तै लाग्छ । कि नेपाल भारतीय प्रदेश जस्तै हो । यस भावनालाई नेपाली नेता बल पु¥याई रहेको छ होइन त ? दोष मधेशी नेतालाई दिने गर्छ । मधेशी नेता दिल्ली र भारतीय दूतावास गयो भने राष्ट्रघाती र पहाडी नेता गयो भने राष्ट्रिय सम्मान ? मधेशी नेता भारतीय सरकारको पोषक तत्व हो । मधेशीको कुनै अस्तित्व नै छैन । यस्ता सोचले देशलाई कहिलेसम्म अखण्ड राख्न सकिन्छ ?
डर नं. ४. नेपालका पहाडी शासकको एउटा अरू पनि डर छ । फादर लैंडको अदृश्य अधिकार । नेपाल त मदरलैण्ड हो तर फादर लैण्ड नि ? फादर लैंड को त ? निश्चय नै भारत होइन र ? भारतको मनसाय पनि छैन कि नेपाल हामै्र अंश हो । स्वतन्त्र देश त नाम मात्रको हो ।
त्यसैले बराबर आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप हुँदैछ । शायद उत्तर छिमेकीको पनि मौन समर्थन छ । इतिहास कोल्टाएर हेर्नुस् । तराईको नक्सा परिवर्तन गर्न चाहेमा के उत्तर छिमेकी नैतिक रूपले बोल्न सक्छ ? अथवा रूस, अमेरिका र युरोपीयन यूनियन विरोधमा आउँछ ? मधेशी त स्वायत मधेश मात्रै चाहन्छ । पहाडी (नेपाली)सँग मिलेर बस्न चाहन्छ । तर गैरमधेशीहरू चाहँदैनन् । एउटा हिन्दीमा उखान छ “गज नहीं हारेंगे, थान हो रगे” त्यस्तै नहुन जाओस् ।
संविधान ९० प्रतिशत साँसदले पास गरिएको तर ९० प्रतिशत साँसद मात्र १२% जनताको प्रतिनिधित्व गर्छ । बाँकी ८८ प्रतिशत जनता विभेदकारी संविधानलाई किन मान्ने ?
समान जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व दिन्छ भने सँसदमा मधेशीहरूको प्रतिनिधित्व हुन्छ । के सधैं पहाडीहरूको नै बर्चश्व रहोस् ? मधेशीको बहुमत हुनु हुँदैन ? यो कुविचार हो । मधेशी पहाडीको कुरा कहाँबाट अयो ? बहुमत जसको होस् । पहाड हिमाल तराई सब एक छ ।
यो बोलीमा मात्रै सीमित रहनु भनेको मनमा भयंकर विभेद लुकेको छ । मोरंग, सुनसरी, झापा मधेश होइन ? यदि हो भने पहाडमा किन जानु पर्ने ?
एमाले नेता भन्छन्, समतल जमिन चाहिन्छ भने विहार, युपीतिर जाउँ । विहार, युपीलाई नेपालमा किन नमिलाई लिने ? तर विहार, युपीलाई नेपालमा मिलाउन सकिन्छ कि विहार युपी, मधेशलाई नै विहार, युपीमा मिलाई लिन्छ । यो त पावर पावरको कुरा हुनेछ ।
तराईको जनसंख्या भारतीय नक्कली नागरिकतामा मात्र पत्रबाट बढेको छैन । पहाडबाट पहाडीको बसाई सराइबाट बढेको छ । केही दिन पहिलेसम्म झापामा पहाडीको बसाई १४% थियो । अहिले पहाडी जनसंख्या ५६% छ । राजवंशी, थारूलाई भारततिर अन्यायपूर्वक भगाई दिएको हो । (मधेश दर्पण फिचर सेवा)